आज फेरि बढ्यो सुनको भाउ ! हेर्नुहोस् तोलामा कति पुग्यो? – SUDUR MEDIA
March 7, 2021 AdminLeaveaComment on आज फेरि बढ्यो सुनको भाउ ! हेर्नुहोस् तोलामा कति पुग्यो?
स्थानीय बजारमा आज पहेंलो धातुको मूल्य पुनः उकालो लागेको छ । अघिल्लो साता लगातार ओरालो लागेको सुनको मूल्य आज साताको पहिलो दिन नै तोलमा रु ५०० ले वृद्धि भएको छ ।
मूल्य उकालो लाग्ने क्रममा आज छापावाला सुन तोलामा रु ८६ हजार १०० मूल्य निर्धारण भएको छ । छापावाला सुन तोलामा शुक्रबार रु ८५ हजार ६०० मा कारोवार भएको थियो । यस्तै तेजाबी सुन पनि तोलामा रु ५०० ले नै उकालो लागेको छ ।
तोलामा रु ८५ हजार १५० मा शुक्रबार कारोवार भएको तेजाबी सुन आजका लागि भने रु ८५ हजार ६५० मूल्य निर्धारण भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । त्यस्तै चाँदीको मूल्य भने आज स्थिर छ । चाँदी तोलामा रु एक हजार २५० मा कारोवार हुनेछ ।
यो पनि हेर्नुहोस्: समयमै काम नहुँदा दिनहुँ वडा धाउँदै ! टीकापुर नरगपालिका–१ एकतानगर शिविरका टेकबहादुर दमाइँ हप्ता दिनदेखि वडा कार्यालय धाउँदै आउनुभएको छ । छोराको नागरिकताको सिफारिसका लागि वडा कार्यालय पुगेका टेकबहादुर शुक्रबार पनि लाइनमै देखिनुभयो ।
उहाँको धेरै ठूलो काम पनि थिएन । सबै प्रक्रिया पूरा भई सिफारिस मात्रै लिनुपर्ने भए पनि तीन दिनदेखि त्यही सिफारिसको पछाडि टेकबहादुृर दौडिरहनुभएको छ । “वडाबाट हुने सबै काम भएको भए पनि सिफारिस पत्र नपाउँदा दैनिकी वडा कार्यालयमै बिताउनु परेको छ”, टेकबहादुरले भन्नुभयो, “अझै कति समय लाग्ने हो थाहा छैन, दिनभर लाइनमा बस्यो, साँझसम्म काम बन्दैन, रित्तो घर फर्कनुपर्छ ।”
त्यस्तै बाढीपीडित शिविरका जनक विक पनि तीन दिनदेखि वडा कार्यालय धाउँदै आउनुभएको छ । जन्म दर्ताका लागि वडा कार्यालय पुगेका जनकको निवेदनले कार्यालयभित्र प्रवेश पहिलो दिनमै गरेको थियो । तीन दिन हुँदासम्म त्यो निवेदनको परिणाम जनकले पाउन सक्नुभएको छैन । “सबैभन्दा बढी भीड मालपोत कि प्रशासन हुन्छ भन्थे, त्योभन्दा बढी वडामा पनि रहेछ”, जनकले भन्नुभयो, “जनताबाट निर्वाचित भई आएका जनप्रतिनिधिले नागरिकको सेवा छिटोछरितोका लागि पहल गर्नुपर्ने हो, त्यो भएन, परिणाम नागरिकले दुःख पाउन थाले ।”
टेकबहादुर र जनक वडा कार्यालयमा सेवा लिन आएका दुई उदाहरणमात्रै हुनुहुन्छ । दैनिक सयौंको सङ्ख्यामा वडा कार्यालयमा सेवाग्राही आउँछन् । अधिकांश सेवाग्राहीको काम पहिलो दिनमा हुने कुनै सम्भावना नै हुँदैन । किनभने, पहिलो दिनकै सेवाग्राहीका फाइल कर्मचारीका टेबलमा भरिएका हुन्छन् । अहिले त सेवाग्राही पनि फाइल दिने र घर फर्कने गरेका छन् ।
वडा कार्यालयको यो भीडभाड व्यवस्थित गरी सेवाग्राहीलाई सहजरुपमा सेवा दिनका लागि वडा विभाजनको विकल्प नरहेको वडासचिव चक्रबहादुर रावलले बताउनुभयो । “मैले २०६३ सालदेखि वडा कार्यालयको वडा सचिवको रुपमा काम गर्दै आएको छु, अहिलेको मात्र होइन, यस्तो सेवाग्राहीको यो भीडभाड जहिले पनि उस्तै हो”, वडा सचिव रावलले भन्नुभयो, “वडामा चाहिने आवश्यक कर्मचारी थप हुँदै आएको छ, तर पनि सेवाग्राहीको काम सहज रुपमा हुन सकेको छैन, हामी कर्मचारीलाई पनि धेरै अप्ठ्यारो महसुस हुँदै आएको छ ।”
उहाँले वडा विभाजन भएपछि सेवाग्राहीसँगै कर्मचारीलाई पनि सहज हुने भन्दै वडा विभाजन नै वडा नं १ को विकल्प हुनसक्ने बताउनुभयो । वडा सचिव रावलले कार्यालय व्यवस्थापन भएपश्चात् केही सहज भए पनि सेवाग्राहीलाई थेग्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । सेवाग्राहीलाई सेवा लिन सास्ती भएकै कारण गत पुस २६ गते शुरु भएको नगरपालिकाको नगरसभा वडा विभाजनको विषयमा सहमति जुटाउन नसक्दा निष्कर्षविहीन भएको छ ।
झाक्रीलाई भगवान भन्दै रोए माताहरु, झाक्रीले पनि आँसु थाम्न सकेनन् ! हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
भोलीको राशिफल हेर्नुहोस् : मिति २०७७ साल फाल्गुन २४ गते सोमबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ मार्च ०८ तारिख
कोरोना कालमा पुनः जुर्मुराए गुर्जो–अभियानकर्मी युवा……
आज सुनचाँदीको भाउ बढ्यो ! हेर्नुहोस् प्रति तोला कति पुग्यो……